[Igama Latin] polygonum Cuspidatum Sieb. et Zucc
[Plant Umthombo] China
[Iinkcukacha] Resveratrol 50%, 95%, 98% ngo solibalo
[Inkangeleko] Brown okanye powder emhlophe entle
[Plant Part Isetyenziswa] enabayo & Root
1,100% umthombo yendalo. resveratrol sethu 100% enencindi imifuno zendalo, ekhuselekileyo kakhulu kwaye bioactive ngakumbi, nto leyo esisityebi zombini ico-resveratrol kunye kwelentshona ye-resveratrol.
resveratrol 2.Our phantse abe kukha beve krakra thelekisa kwezinye resveratrols kwaye kube lula ukuthatha yi ngomlomo.
3.We unikele resveratrol ngexabiso nokhuphiswano kakhulu nomgangatho obalaseleyo.
4.We ube mkhulu kakhulu kwaye sikwazi ngumvelisi zabaxumi imfuneko ethile.
Resveratrol alicandelo esebenzayo kumbiwa Huzhang (polygonum cuspidatum) e China.
Lo phenol antioxidant kunye vasodilator eziyingozi abangaphangeliyo serum triglyceride yokuqaphela, peroxidation lipid, kunye zegazi udibaniso.
It awulungelelananga asetyenziselwa ukunyanga isifo igazi ezifana yegazi kunye hyperlipidemia. Ukongeza, iye anti-virus kwaye anti umsebenzi ukudumba, esinganyanga izifo ngeentsholongwane etsolo kunye hepatitis wentsholongwane egazini.
Previous: Reishi Kwamakhowa Extract
Okulandelayo: Rhodiola Rosea Extract
Polygonum cuspidatum luthathe